Kudzidza Chokwadi cheBhaibheri muFrance | Yokudzidza
NYAYA YEUPENYU “Zvitsuwa Zvizhinji Ngazvifare”
KUBVA MUDURA RENHOROONDO YEDU “Jehovha Akakuunzai kuFrance Kuti Muzodzidza Chokwadi”
SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
Nharireyomurindi—Yekudzidza | August 2015
ANTOINE SKALECKI paaiva achiri mukomana aiva nebhiza raaigara achifamba naro. Aitakura marasha nebhiza rake achifamba zvishoma nezvishoma nemumatanera emugodhi wainge wakadzika mamita 500, uine chiedza chisina kunyatsojeka. Baba vaAntoine vainge vakuvara pakadhirika mugodhi, saka kuti mhuri yavo iwane zvokurarama nazvo, Antoine aitofanira kuenda kubasa achishanda mumugodhi kwemaawa 9 pazuva. Rimwe zuva, Antoine akadhirikirwa ari mumugodhi akapotsa afa.
Maturusi aishandiswa nevashandi vemumigodhi vokuPoland, uye kambani yomugodhi kuDechy, pedyo neSin-le-Noble, kwaishanda Antoine Skalecki
Antoine aiva mumwe wevana vakawanda vakaberekerwa kuFrance nevabereki vokuPoland kuma1920 uye kuma1930. Nei vanhu vokuPoland vakauya kuFrance? Nyika yePoland payakawanazve rusununguko pakapera Hondo Yenyika I, yakatanga kuva nevanhu vakawandisa. Asi France yakanga yarasikirwa nevarume vanopfuura miriyoni muhondo yacho, saka yaida vanhu vakawanda vanoshanda mumigodhi yemarasha. Saka muna September 1919, hurumende yeFrance neyePoland dzakasainirana chibvumirano chokuti zvimwe zvizvarwa zvokuPoland zvikwanise kuuya kuzogara kuFrance. Pakazosvika gore ra1931, vanhu vokuPoland vainge vatamira kuFrance vakanga vava 507 800, uye vakawanda vacho vaigara munzvimbo dzinocherwa migodhi dziri kuchamhembe.
Vanhu ava vakabva kuPoland vaishanda nesimba chaizvo uye havana kusiya tsika dzavo, kusanganisira kuda kwavaiita zvechitendero. Antoine uyo ava nemakore 90 anoti, “Sekuru vangu Joseph vaitaura nezveMagwaro Matsvene vachiaremekedza sokudzidziswa kwavainge vaitwa nababa vavo.” Musi weSvondo woga woga, vashandi vemumigodhi vokuPoland nemhuri dzavo vaipfeka zvipfeko zvakanaka chaizvo vachienda kumachechi avo sezvavaiita vari kumusha kwavo. Izvi zvaitosembura zvimwe zvizvarwa zvokuFrance zvakanga zvisina basa nokunamata.
Vanhu vakawanda vokuPoland vakatanga kuonana neVadzidzi veBhaibheri kuNord-Pas-de-Calais. Kubva muna 1904, Vadzidzi veBhaibheri ava vainge vachishingaira chaizvo kuparidza munzvimbo iyi. Mugore ra1915, Nharireyomurindi yakatanga kuprindwa mumutauro wePolish mwedzi woga woga uye The Golden Age (yava kunzi Mukai!) yakatanga kuwanikwawo mumutauro uyu muna 1925. Mhuri dzakawanda dzaifarira zvinotaurwa neMagwaro zvaiva mumagazini aya uyewo zvaiva mubhuku rainzi The Harp of God raiva mumutauro wePolish.
Mhuri yanaAntoine yakanzwa nezveVadzidzi veBhaibheri kubva kuna sekuru, hanzvadzi yaamai vaAntoine, avo vakapinda musangano wavo wokutanga muna 1924. Gore iroro, Vadzidzi veBhaibheri vakaita gungano ravo rokutanga mumutauro wePolish kuBruay-en-Artois. Pasati papera mwedzi, Joseph F. Rutherford, mumiririri akabva kumahofisi edu makuru, akauya akapa hurukuro mutaundi iroro uye vanhu 2 000 vakauya kuzoteerera. Pavakaona boka guru revanhu vakanga vauya, vakawanda vacho vari vokuPoland, Hama Rutherford vakavaudza kuti: “Jehovha akakuunzai kuFrance kuti muzodzidza chokwadi. Iye zvino imi nevana venyu mava kufanira kubatsirawo vanhu vomuFrance! Pachine basa rakakura rokuparidza rinofanira kuitwa uye Jehovha achaita kuti pave nevaparidzi vachaita basa iri.”
Izvi ndizvo chaizvo zvakaitwa naJehovha Mwari. VaKristu ava vokuPoland vaishanda nesimba pakuparidza sezvavaingoitawo pavaishanda mumigodhi. Vamwe vavo vakatodzokera kumusha kwavo kuPoland kuti vanoudzawo vamwe chokwadi ichi chavainge vadzidza. Teofil Piaskowski, Szczepan Kosiak, uye Jan Zabuda vaiva vamwe vevaya vakabva kuFrance kuti vanoparidza mashoko akanaka munzvimbo dzakasiyana-siyana dzokuPoland.
Asi vaevhangeri vakawanda vaitaura chiPolish havana kubva muFrance uye vakaramba vachishingaira kuparidza pamwe nehama nehanzvadzi dzavo dzomuFrance. Pagungano rakaitwa muna 1926 kuSin-le-Noble, vanhu 1 000 vakapinda nemutauro wePolish uye 300 vakapindawo neFrench. Bhuku Regore ra1929 rakati: “Mugore iri, hama dzokuPoland 332 dzakabhabhatidzwa.” Hondo Yenyika II isati yatanga, paungano 84 dzaiva muFrance, 32 dzacho dzaiva dzemutauro wePolish.
Hama nehanzvadzi dzokuPoland dzaigara kuFrance dzichienda kugungano. Mashoko akanyorwa apo anoti “Zvapupu zvaJehovha”
Muna 1947, Zvapupu zvaJehovha zvakawanda zvakabvuma kudzokera kuPoland, hurumende yeko payakati zvizvarwa zveko zvichidzoka. Asi kunyange pavakadzokera, kushanda nesimba kwavaiita pakuparidza uye kwaiita hama nehanzvadzi dzavo dzokuFrance, kwakaoneka nokuwedzera kwakaita vaparidzi voUmambo ne10 muzana gore iroro. Kubva muna 1948 kusvika muna 1950, vaparidzi vaiwedzera ne20, 23, uye kunyange 40 muzana. Kuti vaparidzi vatsva ava vadzidziswe basa rokuparidza, bazi reFrance rakagadza vatariri vematunhu vokutanga muna 1948. Pavanhu 5 vakasarudzwa, 4 vacho vaiva vokuPoland, uye Antoine Skalecki aiva mumwe wavo.
Zvapupu zvaJehovha zvakawanda zvomuFrance zvichiri kushevedzwa nemazita emadzitateguru avo okuPoland ayo aishanda nesimba mumigodhi uye muushumiri. Mazuva anowo, vanhu vakawanda vari kutamira kuFrance vari kudzidza chokwadi. Pasinei nokuti vaevhangeri vanodzokera kunyika dzokumusha kwavo kana kuti vari kuramba vachigara munyika dzavakatamira, vanoshingaira vachitevedzera zvaiitwa nevazivisi voUmambo vakadai sehama nehanzvadzi dzokutanga-tanga dzechiPolish dzakatamira kuFrance.—Kubva mudura renhoroondo yedu kuFrance.
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA August 2015